မန်ယူကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာရဲ့ အနာဂတ်က နူးကမ့်မှာဖြစ်နေမလား
ဘာစီလိုနာကို တစ်ပတ် ပေါင်(၃)သိန်းခွဲနဲ့ ပြောင်းဖို့ Pogba သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်နေပြီ
8 Aug 2018 . 1:53 PM
မန်ယူအသင်းရဲ့ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ Pogba ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုပြီး သူ့ကလပ်အသင်းဖော်တွေကို ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပေါ့ဘာဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကနေ မန်ယူအသင်းကို ပေါင်(၈၉)သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး (၂)နှစ်အကြာမှာပဲ မန်ယူနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ နီးစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ဘာက မန်ယူအသင်းက ထွက်ခွာလိုတဲ့အကြောင်းကို ဒုအမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူ အက်ဒ်ဝုဒ်ဝပ် Ed Woodward ဆီ မက်ဆေ့ခ်ျ ပေးပို့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မန်ယူအသင်းက အဲဒီသတင်းကို ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။
မန်ယူအသင်းက ပေ့ါဘာကို ရောင်းချဖို့ အစီအစဉ်မရှိတဲ့အပြင် အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက် ပိတ်သိမ်းဖို့က နီးကပ်နေတာကြောင့် သူ့နေရာ အစားထိုးမယ့်ကစားသမား ခေါ်ယူဖို့ အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေ့ါဘာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကို အဓိက ချုပ်ကိုင်နေတဲ့ အေးဂျင့် ရိုင်အိုလာ Raiola က ပေါ့ဘာနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းနေပြီး အခု ဗြိတိန်မီဒီယာတွေက ဘာစီလိုနာဟာ ပေါ့ဘာကို တစ်ပတ်လစာ ပေါင်(၃)သိန်းခွဲနီးပါးနဲ့ (၅)နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြနေကြတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ မက်ဆီ Messi လို ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားရှိနေတဲ့အပြင် ပေါ့ဘာရဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဖော်ဟောင်း ဗီဒယ်လ် Vidal လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကြောင့် ပေါ့ဘာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လိုတာနေပါ။ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့က မနက်ဖြန် (သြဂုတ် ၉ရက်)မှာ ပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်လို့ ပေါ့ဘာ၊ မန်ယူနဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ရဲ့ (၃)ပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲ စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် . . .
Photo:The Independent,The Sun
ဘာစီလိုနာကို တဈပတျ ပေါငျ(၃)သိနျးခှဲနဲ့ ပွောငျးဖို့ Pogba သဘောတူညီမှုရခဲ့တယျလို့ သတငျးထှကျနပွေီ
မနျယူအသငျးရဲ့ ပွငျသဈကှငျးလယျလူ ပေါ့ဘာ Pogba ဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့ ဆန်ဒပွငျးပွနတေယျဆိုပွီး သူ့ကလပျအသငျးဖျောတှကေို ဖှငျ့ဟပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ပေါ့ဘာဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကနေ မနျယူအသငျးကို ပေါငျ(၈၉)သနျးနဲ့ ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး (၂)နှဈအကွာမှာပဲ မနျယူနဲ့ လမျးခှဲဖို့ နီးစပျနတောဖွဈပါတယျ။ ပေါ့ဘာက မနျယူအသငျးက ထှကျခှာလိုတဲ့အကွောငျးကို ဒုအမှုဆောငျခြုပျဖွဈသူ အကျဒျဝုဒျဝပျ Ed Woodward ဆီ မကျဆခြေျ့ ပေးပို့အကွောငျးကွားခဲ့တယျလို့ သတငျးထှကျပျေါခဲ့ပမေယျ့လညျး မနျယူအသငျးက အဲဒီသတငျးကို ငွငျးဆနျခဲ့တယျ။
မနျယူအသငျးက ပေ့ါဘာကို ရောငျးခဖြို့ အစီအစဉျမရှိတဲ့အပွငျ အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျ ပိတျသိမျးဖို့က နီးကပျနတောကွောငျ့ သူ့နရော အစားထိုးမယျ့ကစားသမား ချေါယူဖို့ အခကျအခဲရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပေ့ါဘာရဲ့အပွောငျးအရှတှေ့ကေို အဓိက ခြုပျကိုငျနတေဲ့ အေးဂငျြ့ ရိုငျအိုလာ Raiola က ပေါ့ဘာနဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးတို့ရဲ့ အပွောငျးအရှဖွေ့ဈမွောကျအောငျ ကွိုးပမျးနပွေီး အခု ဗွိတိနျမီဒီယာတှကေ ဘာစီလိုနာဟာ ပေါ့ဘာကို တဈပတျလစာ ပေါငျ(၃)သိနျးခှဲနီးပါးနဲ့ (၅)နှဈစာခြုပျခြုပျဆိုဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယျလို့ ဖျောပွနကွေတယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ မကျဆီ Messi လို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားရှိနတေဲ့အပွငျ ပေါ့ဘာရဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဖျောဟောငျး ဗီဒယျလျ Vidal လညျး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးက ပွောငျးရှခေဲ့တာကွောငျ့ ပေါ့ဘာဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးကို ပွောငျးရှလေို့တာနပေါ။ နှရောသီအပွောငျးအရှကေ့ မနကျဖွနျ (သွဂုတျ ၉ရကျ)မှာ ပိတျသိမျးမှာဖွဈလို့ ပေါ့ဘာ၊ မနျယူနဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ရဲ့ (၃)ပှငျ့ဆိုငျဇာတျလမျးက ဘယျလိုအဆုံးသတျမလဲ စောငျ့ကွညျ့သှားရမှာဖွဈပါတယျ . . .